Lugood Xawaarahaaga? 10 Talooyin Si Samee Lugood 10 Run si dhakhso ah
> Resource > Lugood > 10 Talooyin Si Samee Lugood 10 Run si dhakhso ah
Haddii aad weligaa ordi Lugood labada Windows iyo Mac nidaamka qalliinka ka hor, waxaa laga yaabaa in ay aad u helay in Lugood for Windows waa mid aad gaabis ka badan Lugood u Mac. Qaar ka mid ah mid ka mid ah ayaa sheegay in tani ay tahay, maxaa yeelay, Apple ma ahan mid halis ah oo ku saabsan Lugood for Windows iyo doonayaa in uu muujiyo in dadka Lugood shaqada si ee nidaamka ka hawlgala Mac, sababtoo ah waxaa kaliya ka fiican. Shaqsi ahaan, waxaan si Uma maleynayo. Lugood waa software tababarihii warbaahinta ugu caansan labada Windows iyo Mac, laakiin qaar ka mid ah muuqaalada shaqeeyaan si fiican oo dhakhso ee Mac OS, ilaa xad. By ay ka saareen adeegyada aan loo baahnayn iyo muuqaalada ku Lugood, waxaad gebi karaa dardar Lugood aad wax nidaamka qalliinka. Talooyin ayna waxa kale oo loo isticmaali karaa in la sameeyo Lugood aad u ordaan dhakhso ee Mac.
Ma u adkaysan karaa Lugood gaabiska? Raadi kale oo Lugood free halkan , ama u hesho qalab Lugood si kor loogu qaado waayo-aragnimo.
Rakibaadda si dhakhso ah
Lugood ma soo xiro Windows. Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo waxaa gacanta iyo rakibi in nidaamka Windows. Ka hor inta aadan bilaabin si loo soo dajiyo, curyaamo fursad u ku daray music rakibi doonaa Lugood dhakhso. Taas macnaheedu waxa weeye isbedel, si kastaba ha ahaatee, in aad u baahan doontaa in aad soo dhoofsadaan music ka dib.
Disable Services aan loo baahnayn
Apple sida caadiga ah loo maleeyo in aad leedahay iPod / iPhone / iPad iyo adeegyo badan oo u furan yihiin by default. Haddii aad qabtid qalab Apple lahayn, gab kala dooranayo.
1. Lugood Daahfurka guji Edit Waxa aad rabtid.
2. Tag Qalabka tab.
3. Uncheck fursadaha of ogolow Lugood gacanta ka hadla fog iyo remotes Raadi iPod taabto, iPhone iyo iPad. Haddii aadan la wadaagin maktabadda la kombiyuutarada ee network, u tag Sharing tab iyo gab Share ikhtiyaarka aan maktabadda on my network deegaanka.
Saar Smart Playlists
Lugood si joogto ah u falanqeeyaan doonaa maktabada in ay curiyaan Smart playlist, oo mashquulin badan oo khayraadka nidaamka. Delete isticmaalin Smart Playlists si loo dardar Lugood.
1. Run Lugood, xaq guji playlist a smart dooro saar.
2. Ku celi hannaanka si loo soo saaro liisaska kale Smart.
muujinta ah hanad Lugood kaa caawinaysaa in aad ogaado music dheeraad ah waxa aad maqli, oo is barbar music dhadhan aad dadka kale, iyadoo la isticmaalayo khayraadka badan, sidoo kale. Si gab hanad, Tag kaydi menu dooro hanad Disable.
Delete nuqul Files
A maktabadda music badan oo hoos u dhigi doono Lugood aad. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in ay tirtirto file nuqul si loo yareeyo maktabadda music Lugood si aad u hesho Lugood dhakhso ah. Waa kuwan sida:
1. Open Lugood oo taga si aad maktabadda.
2. Riix menu File ka dibna riix Display item nuqul.
3. waxyaabaha nuqul waxaa lagu soo bandhigaa. Xaqa guji song aad rabto in aad ka saarto oo guji saar.
4. Xaqiiji adigoo gujinaya OK.
Dami Cover Flow
In kasta oo ay u arkaan Cover Flow waa il-qabad, waa u gaabiyaa ordaan oo xun marka aad u baahan tahay si aad u hesho music. Halkii aragtida Cover Flow, waxaan talinayaa music findingiTunes in List aragtida caadiga ah. Si aad u bedesho, u tag View dooro "sida List" ama hab aragtida kale halkii Cover Flow.
Iska yaree aruuray
Macluumaad column aan loo baahnayn in playlists aad sidoo kale sabab ay gaabis Lugood. Too tiirar badan ma aha oo kaliya isticmaalaan khayraadka ka badan, laakiin waxa ay sii adkeeyeen ka heli info aad rabto. Si loo yareeyo aruuray tan, xaq guji bar column dusheeda ka dibna uncheck tiirar aan waxtar lahayn.
Jooji Messages dhibsado
"Ha i sidii mar kale" mar Macluumaadka waa wax aad looga xumaado. Waxaa Hubi si aad u hesho adduunka xasilloon, iyo waqtiga badbaadiyo.
Isticmaal fayl ay isu Abaabula Playlists
Haddii aad qabto wax badan oo albums, waxaa abaabulo galay fayl playlist u suurtogelin doonaa in aad si deg deg ah u hesho. In sidaa la yeelo, guji kaliya File / New playlist Folder. Waxay kuu soo jiidi karaan jeedi playlist, waxa uu.
m Auto syncing ma aha mar walba loo baahan yahay, sababtoo ah waa laga yaabaa in in aad u baahan tahay oo kaliya si ay u gudbiyaan sawiro qaar ka mid ah si aad iPhone isticmaalaya iPhoto, halkii ay ka syncing music. Xataa waxaad yaabaa wareejiyo music / video aan Lugood . Sidaas waxaa lagu talinayaa in aad gab syncing si toos ah tan oo kale ah ka galeeysid bidix doorato qalabka xiran iyo uncheck doorasho Automatic nidaameed.
Talooyin Dhammaan ma caawin? Okay, kaliya aad u hesho xal kale Lugood free halkan.
Abaabulaan Lugood Library toos ah
TunesGo waa qalab ah oo music aad u awood badan ku caashaqay music, waxa ay tayadoodii karaa Lugood iyo maktabadda music deegaanka iyadoo hal click. Raadi macluumaad la la'yahay, farshaxanka album iyo lyrics si fudud, ku dar maqan tahay dabool, tirtirto tus, oo ka saari maqan / kuwan raadkaygay jebiyey.